Zvibvumirano Zviri Kupotsa Pane Yangu iPhone! Heino Kwayakaenda. - Iphone
screen kutenderera pane ipad mweya 2
maitiro ekugadzirisa nhema skrini pa iphone 5
chii chinonzi dfu modhi pane iphone 5
zvinofamba sei data zvinorevei
Zvibvumirano Zviri Kupotsa Pane Yangu iPhone! Heino Kwayakaenda.
Restrictions Is Missing My Iphone
Iwe uchangobva kuvandudzwa kuIOS 12, asi ikozvino haugone kuwana Zvibvumirano. Usanetseka, Kurambidzwa hakushaikwe, kwave kungofambiswa! Muchinyorwa chino, ndicha tsanangura kuti Zvibvumirano zvakaendeswa kupi uye kuti ungashandisa sei Screen Nguva kudzora izvo mumwe munhu anogona kana zvaasingakwanise kuita pane yako iPhone !
Ndekupi Kurambidzwa kwe iPhone?
Paunogadziridza yako iPhone kuIOS 12, iwe uchaona kuti Kurambidzwa kwaendeswa kune iyo Screen Nguva chikamu mune iyo Zvirongwa app. Unogona kuwana Screen Nguva nekuvhura Zvirongwa nekutepa Screen Nguva .
Kana usati, tapira Vhura Screen Screen uye gadzira Screen Nguva Passcode. Mune iyo Screen Nguva menyu, iwe uchaona Zvemukati & Zvekuvanzika Zvirambidzo - ndipo panotamiswa Zvibvumirano.
Chii chinonzi Screen Nguva?
Screen Nguva chinhu chitsva chakaunzwa pamwe nekuburitswa kweIOS 12. Yakagadzirirwa kubatsira vashandisi kubata kuti vanotarisa kwenguva yakareba sei paiyo iPhone skrini uye, mune dzimwe nguva, kudzora zvavanogona kuona. Iwe unogona kudzidza zvakawanda nezve Screen Nguva mune yedu chinyorwa nezve iyo nyowani iOS 12 maficha !
Maitiro Ekumisikidza Zvemukati & Zvekuvanzika Zvibodzwa
Kuti umise Zvemukati & Zvekuvanzika Zvirambidzo pane yako iPhone, enda kuZvirongwa -> Screen Nguva uye tap Zvemukati & Zvekuvanzika Zvirambidzo .
Kutanga, uchafanirwa kuseta Screen Nguva Passcode. Iyi yakadarika passcode kubva pane yaunoshandisa kuvhura yako iPhone. Wobva wabatidza switch iripedyo ne Zvemukati & Zvekuvanzika pamusoro pechiso.
Iye zvino izvo Zvemukati & Zvekuvanzika zvavhurwa, iwe une matani ekudzora izvo zvinogona kana zvisingakwanise kuwanikwa pane yako iPhone. Heano kuputsika kweakakosha maficha mukati meComputer & Zvekuvanzika Zvirambidzo:
iTunes & App Store Kutenga : Inokutendera iwe kudzima kugona kuisa maapplication, kudzima maapps, uye kutenga mukati meapp.
Mvumo Yakabvumirwa : Inokutendera iwe kudzima mamwe akavakirwa-mukati maapps seSafari, FaceTime, uye Wallet.
Zvemukati Zvirambidzo : Inokutendera iwe kudzivirira kurodha pasi mimhanzi, mabhaisikopo, mabhuku, uye zvirongwa zveTV zvichibva pahuwandu hwavo. Iwe unogona zvakare kusefa kunze kwakajeka mawebhusaiti uye kugadzirisa mashoma ako Game Center marongero.
Kugovana Nzvimbo : Inokutendera iwe kudzima Govera Kwangu Nzvimbo, ficha inogovera yako chaiyo nzvimbo neshamwari uye mhuri mune Meseji app.
Kuvanzika : Inokutendera iwe kudzima Nzvimbo DzeSevhisi uye gadzirisa zvakavanzika marongero emamwe maapplication. Idzi sarudzo dzinogona kuwanikwawo mu Zvirongwa -> Zvakavanzika .
Zvemukati & Zvekuvanzika Kurambidzwa zvakare zvinokugonesa iwe Kubvumidza Shanduko kune zvakawanda zvakasiyana zvinhu zvinosanganisira yako pascode, vhoriyamu, maakaundi, TV mupi, kumashure app zviitiko (Yekumashure App Refresh), maseru data maseru, uye Usakanganise Paunenge uchityaira marongero.
Ndinogona Kudzima Zvibvumirano Mushure mekunge Vagadzwa?
Ehe, iwe unogona kudzima Zvemukati & Zvekuvanzika Kurambidzwa chero nguva! Asi heino kubata - kuti uvadzime, iwe unofanirwa kuziva iyo Screen Nguva passcode. Nenzira iyi, mwanakomana wako kana mwanasikana haagone kungodzima Zvemukati Zvekuvanzika & Zvirambidzo marongero chaipo mushure mekuzvimisikidza!
Kuti ubvise Zvemukati & Zvekuvanzika Zvirambidzo, vhura Zvirongwa uye tap Screen Nguva . Wobva wadzvanya Zvemukati & Zvekuvanzika Zvirambidzo uye nyora yako Screen Nguva passcode. Chekupedzisira, bvisa switch iri pamusoro pekona kurudyi kweMukati & Zvemukati Zvirambidzo. Iwe uchaziva kuti yadzimwa kana switch iri chena.
Iwe Wakawana Kurambidzwa!
Iye zvino zvaunoziva Kurambidzwa hakusi kushayikwa, unogona kuenderera mberi nekutarisa uye kudzora zvinoita nevanhu uye zvavasingakwanise kuita pane yako iPhone! Ndinovimba iwe uchagovana ichi chinyorwa pasocial media kana yako mhuri kana shamwari vatenda Zvibvumirano zvisipo pane yavo iPhone. Kana iwe uine chero mimwe mibvunzo nezve yako iPhone kana iOS 12, inzwa wakasununguka kusiya mhinduro pazasi!
Iyo nhamba yechishanu inorevei pamweya? Ngirozi Nhamba
iPad Mutauri Haisi Kushanda? Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa!
Zvinodikanwa zveKuroora Kuroorwa muUnited States
ZVIREVO ZVECHINAMATA 69: NENYAYA
Maitiro Ekuwedzera nekubvisa Widgets Pane An iPhone: Iyo Yakareruka Gwara!
Kuremadza May Ingatungamira kune Isingafungidzirwe Shutdowns Pane iPhone? Ichokwadi here?
Ndinofanira Kutsiva Yangu Hita Mvura Isati Yakundikana?
Nei yangu Android Bhatiri Inofa Nokukurumidza? Iyo Yakanakisa Runhare / Hwendefa Bhatiri Hupenyu Saver!
Maitiro Ekuvanza Mapikicha Pane iPhone
Chii chinonzi Apple Kadhi? Ndingaite Sei Ini Kunyorera? Chokwadi!
Ini ndinodzima Sei Kufembera Chinyorwa Pane An iPhone?
Kukosha Kwemuorivhi MuBhaibheri
Hurumende Inobatsira Kutenga Imba Kwekutanga Nguva
Nei Wi-Fi Yakashatirwa Kunze Pane yangu iPhone? Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa!
My iPhone haina kutsigirwa kuICloud! Heino mhinduro yekupedzisira.
Foni Yakakundikana? Heino Chaicho Kugadzirisa.
Yangu iPhone Screen Iri Dema! Heino Chikonzero Chaicho Nei.
Sei iPhone Yangu Ichiti Kwete SIM Kadhi? Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa!